हिपत संवाददाता – Page2– हिपत खबर
Articles posted by हिपत संवाददाता (Page 2)
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनका लागि २६ हजार १३० जना कर्मचारी अनलाइन प्रणालीमा नाम दर्ता गराएका छन् ।
यही पुस ११ गतेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले सञ्चालन गरेको अनलाइन फारममा २६ हजार १३० जनाले नाम दर्ता गराएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले बताए ।
उनका अनुसार तीमध्ये १९ हजार ८६८ जना समायोजन रोज्नका लागि तयार र ६ हजार २६२ जनाले समायोजनका लागि फारमसमेत भरिसकेका छन् । यही पुस मसान्तभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ ल्याउँदै समायोजनको कार्य शुरु गरेको छ ।
सरकारले पुस ११ गते २१ दिनभित्र समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई अनलाइन आवेदन माग गरेको छ । समायोजनका लागि फारम भर्नका लागि सरकारले सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग, समिति र स्थानीय तहमा ‘सहयोगी कक्ष’ सञ्चालन गरेको छ । आवेदन दिएकामध्ये आध्यदेशअनुसार योग्य भएका कर्मचारीलाई छनोटमार्फत समायोजन गरिने उपसचिव निरौलाले बताए ।
January 3, 2019 January 3, 2019 हिपत संवाददाता मा प्रकाशित !
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायिŒवअन्तर्गत विभिन्न शाखाहरुबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको छ । बैंकको भैरहवा शाखाले मंगलबार सिद्घार्थनगर, रुपन्देहीस्थित बहिरा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी २ थान कम्प्युटर, २०० वटा उनीको टोपी तथा १ थान वाटर डिस्पेन्सर सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको छ । प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेको प्रमुख आतिथ्य रहेको उक्त कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिद्वय बैंकका सञ्चालक राहुल अग्रवाल तथा विद्यालयक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खिमलाल पुरी रहेका थिए । कार्यक्रममा पुरीले बैंकप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुका साथै बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरे ।
बैंकको खुरखुरे शाखाले गत २२ मंसिरमा राप्ती नगरपालिका १०, चितवनस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका कक्षा १ देखि ३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि १०५ थान उनी स्वेटर प्रदान गरेको थियो । आर्थिक स्थिति निकै नै कमजोर भएका चेपाङ विद्यार्थीहरुको बाहुल्यता रहेको सो विद्यालयका विद्यार्थीहरुको जाडो याममा पठनपाठन सहज बनाउने हेतुले सहयोग गरिएको थियो ।
यसैगरी बैंकको मंगलसेन शाखाले ४ पुसमा अछाम बहुमुखी क्याम्पस मंगलसेनमा अध्ययनरत ११ जना योग्य विद्यार्थीहरुलाई कुल ३३ हजार छात्रवृत्ति स्वरुप प्रदान गरेको थियो ।
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्धित ‘आइएमई डिजिटल’ र जनता बैंक नेपाल लिमिटेड बीच ‘आइएमई पे’ मोबाइल मनीमार्फत विविध मोबाइल वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइएमई डिजिटलका तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत डेनियल डी श्रेष्ठ र जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कु“वर क्षत्रीले सोमवार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता अनुसार जनता बैंक ‘आइएमई डिजिटल’ को बैंकिङ साझेदार संस्था हुनेछ र बैंकका सेवाग्राहीहरूले चाँडै नै आइएमई पे वालेटमा आङ्खनो बैंक खाता लिंक गर्नेलगायत बैंक खाताबाट वालेट र वालेटबाट बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नेजस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । साथसाथै जनता बैंक नेपालका सेवाग्राहीहरुले ‘आइएमई पे’ मा उपलब्ध रिचार्ज, मनी ट्रान्सफर र क्युआरमार्फत गरिने भुक्तानी सेवा पनि प्राप्त गर्न सकिने छ ।
काठमाडौं । प्रेमकथामा बनेको फिल्म ‘प्रेमनाथ’को ट्रेलर तथा फष्टलुक सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा फिल्मको ट्रेलर तथा फष्टलुक सार्वजनिक गरिएको हो ।
फष्टलुक पोष्टरमा फिल्मका पुरै कलाकारले स्थान पाएका छन्, भने ट्रेलर पनि अन्य फिल्मको भन्दा केही भिन्न प्रकारले निर्माण गरिएको छ । करिब तीन मिनेटको ट्रेलरमा प्रेम, एक्सन र रोमान्सका दृश्यले प्रथामिकता पाएका छन् । ट्रेलर साउथ फिल्मको झल्को दिने खालको रहेको छ ।
२५सय बर्ष अगाडिको प्रेमकथा दाबी गरिएको फिल्म कलाकार गणेश बेलवासेले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा सुरवीर पण्डित, गजित बिष्ट, नवीन श्रेष्ठ, कमल गाउँले, गणेश बेल्वासे, मियुम जिरेल, शेखरजंग मल्ल, सम्झना भेटवाल, पूजा रिजाल, सिर्जना राईलगायतको अभिनय रहेको छ ।
२२ चैत्रबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्मबाट कृति गौतम र मोनालिशा विष्टले अभिनयमा डेब्यु गरेका छन् । काठमाडौं, लुम्बिनी, रोल्पा, लखनउ, दाङ लगायतका स्थानमा छायाँकन भएको फिल्मका निर्माता गुहेश्वरी बेलबासे हुन् । कपिलप्रसाद दवा कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा सह–निर्माताको रुपमा बसन्तराज भट्ट र मिलन राई समेत रहेका छन् ।
काठमाडौं बाहिर एफडी कम्पनीले वितरण गर्ने फिल्म उपत्यकामा गोपाल कायस्थले वितरण गर्नेछन् । भारतमा वितरणको जिम्मा बर्चस्व इन्फ्राटेक प्रालिका उमेश सिंहले लिएका छन् ।
‘प्रेमनाथ’ अहिलेसम्म फिल्ममा प्रयोग भएका भन्दा फरक प्रेमकथामा निर्माण भएको निर्देशक बेल्वासेले बताए । उनले एक्सन र प्रेमकथाले भरिएको फिल्म दर्शकको रुचिमा पर्ने दाबी गरे । निर्माता गुहेश्वरी बेलवासेले फिल्म निर्माणमा कुनै कम्परमाइज नगरेको बताइन् । फिल्मका कलाकार मियुम जिरेल, शेखरजंग मल्ल, सम्झना भेटवाल, पूजा रिजाल लगायतले फिल्म अभिनय र आफ्नो भुमिकाको बिषय प्रकास पारे ।
‘प्रेमनाथ’का द्वन्द्व निर्देशक भरत क्षेत्री हुन् । संगीतकारमा सन्तोष श्रेष्ठ, भुपु पाण्डे र एसडी योगी रहेका छन् । नृत्य निर्देशन रजिन पाठक हुन् । गीतमा राजेश पायल राई, भुपु पाण्डे, बेनुका राई, सूची पन्थी, अञ्जली पटेल, रेयापे दाजु र चित्रवीर जिसीको स्वर छ । ‘प्रेमनाथ’मा छायांकन सुमिन कार्की, सुरज पाण्डे र सञ्जय सहानीको रहेको छ ।
काठमाडाैँ । ‘मिस पुर्वाञ्चल–२०१८को उपाधि झापाकी पुजा श्रेष्ठले जि’ेकी छन् । सुनसरीको धरानमा शनिबार सम्पन्न प्रतियोगितामा उनले ताजसँगै स्कुटी प्राप्त गरिन् । प्रतियोगितामा धनकुटा हिलेकी अनिला क्षेत्री फस्ट रनरअप र इटहरीकी तपस्या रणपहेली सेकेन्ड रनरअप भए । उनीहरुले क्रमश एक लाख र ५० हजार नगद पाए ।
December 30, 2018 हिपत संवाददाता मा प्रकाशित !
काठमाडौं । नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान, बेलायतले नेपाली गीतसंगीतका क्षेत्रमा योगदान पु¥याएबापत दार्जिलिङकी प्रसिद्ध गायिका दावा ग्याल्मोलाई ‘प्रतिभा सम्मान’ र निबन्ध तथा अनुवादका क्षेत्रमा योगदान दिएबापत गोरखाका युवा लेखक तथा अनुवादक बलराम अधिकारीलाई ‘प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहबीच नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति, वरिष्ठ कवि एवं मुन्धुमविद् बैरागी काइँलाले उक्त सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरे । ताम्रपत्र र २० हजार राशिसहित ‘प्रतिभा सम्मान’ ग्याल्मोलाई र ताम्रपत्र र एक लाख रुपैयाँ नगद राशिसहित ‘प्रतिभा पुरस्कार’ अधिकारीलाई प्रदान गरिएको हो ।
सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेपछि मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि काइँलाले नेपाली भाषा, साहित्य, कला तथा संगीतका क्षेत्रमा दार्जिलिङको अतुलनीय योगदान रहेको बताए । उनले ग्याल्मोजस्ती प्रभावशाली गायिका र युवा निबन्धकार तथा अनुवादक अधिकारीलाई बेलायतमा रहेको नेपाली वाङ्मयिक संस्थाले सही मूल्यांकन गरी सम्मान गरेकोमा खुसी प्रकट गरे ।
समारोहमा सम्मानित तथा पुरस्कृत प्रतिभा ग्याल्मो र अधिकारीले सम्मानित था पुरस्कृत भएमा कृतज्ञता प्रकट गर्दै आ–आफ्ना अनुभूति व्यक्त गरेका थिए ।
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आइतबार पाल्पाको तानसेन र पूर्वखोलास्थित तानसेन शाखा र पूर्वखोला शाखा कार्यालयको औपचारिक समुद्घाटन गरेको छ । पाल्पा र त्यस वरपरका बासिन्दालाई सेवा पु¥याउने उद्देश्यले खोलिएको शाखाको गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल र तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाहीले संयुक्त रुपमा औपचारिक समुद्घाटन गरे ।
कार्यक्रममा गभर्नर डा.नेपालले पाल्पालगायत देशका अन्य जिल्लाहरुमा ग्लोबल आइएमई बैंकले बिस्तार गरेको सेवा सञ्जालले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय टेवा पुगेको बताए ।
कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्घिजीवी तथा स्थानीयबासीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । समारोहमा बैंकका अध्यक्ष ढकालले ग्लोबल आइएमई बैंक लि. सुविधा सम्पन्न स्थानमा मात्र नभएर विकट क्षेत्रमा समेत पुगेर आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी गराउँदै सबै वर्ग र क्षेत्रलाई बैंकिङ पहु“चमा ल्याउने बैंकको प्राथमिक उद्देश्य रहेको बताए ।